Zaza 10 Taona ao Florida Nitory ny Governemanta Amerikana noho ny Haratsin’ny Politika Ara-toetr’andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 17:51 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Español, македонски, Français, English
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 23 Janoary 2018 ity lahatsoratra nosoratan'i Deepa Fernandes ity. Naverina navoaka teto izy ity noho ny firaha-miasan'ny PRI sy ny Global Voices.Raha tsy misy fanamarihana manokana, manondro pejy amin'ny teny anglisy ny rohy amin'ity lahatsoratra ity.
Mipetraka ao amin'ny nosy barrière [fr] any amin'ny morontsiraka afovoany atsinanan'i Florida i Levi. Ny fiatrehana ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina miampy ny fahasimban'ny tora-pasika dia midika fa afaka telopolo na efapolo taona dia hilentika anaty rano ny tranony, ary difotra ny nosiny amin'ny faran'ity taonjato ity. Zava-misy tsy dia mampiraika na dia ny olon-dehibe monina ao amin'ireo tanàna tandindonin-doza ao Florida izany ary, izay no mahatonga ny fahavitrihan'io zaza tsy fahita io amin'ny fitolomana.
Nanatevin-daharana ny hetsika ao amin'ny fitsarana nataon'ireo tanora ao anatin'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra Our Children’s Trust i Levi, rehefa niteny tamin'ny reniny ny Pasiteran'ny fiangonany. Nanontany an'i Levi i Leigh-Ann raha te handray anjara izy ary tsy nisalasala ilay zaza sivy taona.